We Fight We Win. -- " More than Media ": မြန်မာပြည် ပြုပြင်ပြောင်လဲရေးတွင် လျှောက်လှမ်းရမည့် ခြေလှမ်း အဆင့် ၁၀ ဆင့်
မြန်မာပြည် ပြုပြင်ပြောင်လဲရေးတွင် လျှောက်လှမ်းရမည့် ခြေလှမ်း အဆင့် ၁၀ ဆင့်
CNN သတင်း စာမျက် နှာ တွင် ဖော်ပြထားသည့် Suzanne DiMaggio and Priscilla Clapp ၏ “10 steps Myanmar must take” ဆောင်းပါးတွင် မြန်မာနိုင်ငံ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး မှာ အကောင်အထည်ဖော် လုပ်ဆောင်ရမည့် အရေးပါ သည့် ခြေလှမ်းအဆင့် ၁၀ ဆင့် ကို မြန်မာ ပြည်သူများ သိရှိနားလည်ရန် ဆီလျှော်အောင် ဘာသာပြန်ဆိုထားသည်။
1. Redefining and professionalizing the military's political and economic role.
စီးပွားရေး နှင့် နိုင်ငံရေးနယ်ပယ် မှာ တပ်မတော်၏ အခန်းကဏ္ဍ ပါဝင်ပင်သက်နေမှု နှင့် ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ကိုင်မှုများ ကို ပြန်လည်ဆန်းစစ် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုခြင်း ၊ တနည်းအားဖြင့် စီးပွားရေး နှင့် နိုင်ငံရေးနယ်ပယ် မှာ တပ်မတော်၏ အခန်းကဏ္ဍ နှင့် ပါဝင်နေမှုများ ကို ပြန်လည် ဆန်းစစ်စေလိုခြင်း၊
2. Firmly establishing the rule of law and strengthening the judicial branch.
တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး ခိုင်မာ အောင် တည်ဆောက်ရေး နှင့် တရားရေး မဏ္ဏိုင် ကို အားကောင်အောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
3. Protecting individual rights.
လူသားတဦးချင်းစီ၏ အခွင့်အရေး ကို အကာအကွယ်ပေးခြင်း၊
4. Developing effective formulas for ethnic equality.
တိုင်းရင်သားများ တန်းတူညီမျှရေး အတွက် ထိရောက်သည့် လုပ်နည်းလုပ်ဟန်များ ကြီးထွား ဖွံ့ဖြိုးအောင် နှင့် တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးအောင် လုပ်ဆောင်ခြင်း၊
5. Instilling social and religious tolerance.
လူ အဖွဲ့အစည်း နှင့် ဘာသာရေး မှာ သည်းခံမှုများသွတ်သွင်း မွေးမြူပေးခြင်း၊
6. Rooting out corruption.
အကျင့်ပျက်ခြစာမှု ကို အမြစ်ပျက်အောင် ချေမှုန်းခြင်း၊
7. Addressing the “missing middle,”acapacity void across the spectrum of the government and the economy.
အစိုးရ နှင့် စီးပွားရေး နယ်ပယ်တွေ မှာ လူသားစွမ်းအင် ဟင်းလင်းပြင်သဖွယ် ဖြစ်နေတဲ့ လူလတ်တန်းစား များ ပျောက်ကွယ် နေမှု ကို အရေးတယူဆောင်ရွက်ခြင်း၊
8. Delivering the benefits of reforms to the broader population.
ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အကျိုးအမြတ်များ ဟာ လူများစု အကျိူးခံစားခွင့်ရရှိစေ နိုင်ခြင်း၊
9. Addressing land and property rights.
မြေယာ နှင့် အိမ်ယာ ပိုင်ဆိုင်မှု အခွင့်အရေး များ ကို အရေးယူ တယူဆောင်ရွက်ခြင်း၊
10. Developing mechanisms for negotiating trade-offs between economic development on the one hand, and social development and environmental protection on the other.
နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု မှာ လူမှု အဖွဲ့အစည်း ဖွံ့ဖြိုးတက်တက်မှု နှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်မှု နှစ်ဘက်စလုံး အပေါ် အကျိုးခံစားနိုင်ရန် ညှိနှိုင်းတိုင်းပင်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် လုပ်ကိုင်သည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးအောင်လေ့ကျင့်မွေးမြူ ပေးခြင်း၊